Maitiro ekusiya yeruzhinji beta chirongwa pane iOS | IPhone nhau
Maitiro ekusiya yeruzhinji beta chirongwa pane iOS
Kusvikira Apple yagadzira iyo iOS yeruzhinji beta chirongwa, vazhinji vaive vashandisi vakashandisa zvitupa zvekuvandudza zvavakawana paInternet, kuti vakwanise kuisa iwo mabetas eiyo iOS shanduro dzaizouya. Sezvo Apple ichiita kuti chirongwa ichi chiwanikwe kune vese vashandisi, vazhinji ndivo vashandisi vakakurudzirwa kutora chikamu ikozvino shandira pamwe nekuvandudzwa kwebeta.
Kana vhezheni yekupedzisira yeIOS yaburitswa, kuve chikamu chechirongwa chebeta kunoda kuti isu tive nemudziyo wedu unowanikwa kuApple, kuitira kuti isu tinomanikidzwa kuisaDzimwe nguva, vhiki rega rega, mabheji matsva ezvekuvandudzwa anotevera, ayo pakupedzisira anogona kunetsa mushandisi, saka inguva yakanakisa yekusiya chirongwa ichi.
Kana iwe uchifunga kuti nguva yasvika yekusiya yeruzhinji beta chirongwa, iwe unofanirwa kuziva izvo maitiro akareruka, saka chii chisingazotitore isu kupfuura masekondi mashoma. Heano maitiro atinogona kusiya iOS 12 yeruzhinji beta chirongwa:
Mukati mezvirongwa tinya pa Mbiri uye chishandiso manejimendi.
Ma profiles ese atakaisa pakombuta yedu anozoratidzwa pazasi. Dzvanya pa iOS 12 Beta Software Mbiri.
Tevere, tinya pane Dzinga purogiramu.
Panguva iyoyo, isu tichazobvunzwa iyo terminal yekuwana kodhi uye ichatikumbira kuti tione kana tichida kudzima chimiro chinoenderana neiyo iOS 12 beta chirongwa.Tinosimbisa uye ndizvozvo.
Tevere, chishandiso chedu chinotsvaga maseva eApple kuti aone kana ichiwanikwa chero chinyorwa chiripo izvo hazvina kuiswa muchirongwa che beta.
Maitiro ekubatana neiyo iOS 12 yeruzhinji beta chirongwa
Kana, pane kudaro, zvakadaro iwe hausi chikamu cheveruzhinji beta chirongwa, uye iwe unoda kutanga kuyedza pamberi pevanhu vazhinji, iyo nhau inouya ichibva kuruoko rwemberi zvigadziriso zveIOS 12, iwe unofanirwa kupfuura nemu Apple yeruzhinji beta chirongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekusiya yeruzhinji beta chirongwa pane iOS
Apple Watch Series 4 uye iPhone XS Max kukunda pamusoro pezvimwe zvigadzirwa zvitsva
Iyo iPhone XS inogona kutambura imwe inozivikanwa "antennagate"